October 26, 2020 - Online Hartha
ဖူးစာရှငျကို အိပျမကျထဲမှာ မွငျဖူးခငျြတဲ့အခါ ဒီနညျးလမျး သုံးကွညျ့ပါ…။
October 26, 2020 by Online Hartha
ဖူးစာရှင်ကို အိပ်မက်ထဲမှာ မြင်ဖူးချင်တဲ့အခါ ဒီနည်းလမ်း သုံးကြည့်ပါ မိမိရဲ့ဖူးစာရှင်ကို ကြိုတင်တွေ့ဖူးချင်ကြတာဟာ လူတိုင်းပါပဲ …။ ဒါကြောင့် အိပ်မက်ထဲမှာ ဖူးစာရှင်ကိုတကယ်ပဲ မြင်ရမလားဆိုတာ သိရအောင် ကြားဖူးတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေ မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ် ပထမဆုံးဗေဒင်ဆရာအချို့ပြောပြတဲ့နည်း လမ်းလေးကတော့ ဥတစ်လုံးကြက်သွန်ဖြူ သုံးလုံးကို ဆားရေနဲ့ပြုတ်ပေးရမယ်တဲ့ …။ ပြီးတဲ့ အခါ ကျက်သွားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူတွေကို တဝက်စီကိုက်စားလိုက်ပါ …။ ကျန်တဲ့ဟာတွေကို ခေါင်းအုံးအောက်မှာထည့်ထားပြီး မအ်ိပ်ခင် မှာ နှင်းဆီရနံ့ရေမွှေး ကိုဆွတ်ပီးမှအိပ်ပါတဲ့။ စမ်းလုပ်ကြည့်ပေါ့နော် …။ နောက်တစ်နည်းကတော့ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းလေးပါ ဆန်စေ့(၇)စေ့ကိုခေါင်းအုံး အောက်မှာထားပြီး ဖူးစာရှင်ကိုမြင်မက်အောင် သေချာဆုတောင်းပြီးအိပ်တာပါ …။ ပြီးတော့ Kiss me quick ပန်းတွေနဲ့လုပ်တဲ့နည်း လည်းရှိပါသေးတယ် …။ မနက်ကတည်းက အဲ့ဒီပန်းတွေကို ပန်းကန်ပြားလေးပေါ်မှာ ထည့်ထားပြီး … Read more
ရှာရှာဖွေဖွေ သင်မသိသေးတဲ့အရာတွေ (ရှယ်ပြီးသိမ်းထား။ တစ်နေ့ အသုံးလိုပါလိမ့်မယ်။)…….
ရှာရှာဖွေဖွေ သင်မသိသေးတဲ့အရာတွေ (ရှယ်ပြီးသိမ်းထား။ တစ်နေ့ အသုံးလိုပါလိမ့်မယ်။) မီးကင်ကြည့်မှ မြင်ရသော လျှို့ဝှက်စာ ကြက်သွန်နီနှင့် ဆပ်ပြာကိုဆတူရော၍ ထောင်းပြီး ရေအနည်းငယ်ဖြင့်ဖျော်ပါ။ အရည်ကြည်ကို စုတ်တံဖြင့်တို့ပြီး စက္ကူပေါ်တွင်စာရေးပါ ။ ခြောက်သွားပါက မီးကင်ပြီးမှ ပြန်ကြည့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဖိုက်ဘာပစ္စည်းများ အရောင်တင်နည်း သွားတိုက်ဆေးနှင့် အုန်းဆီ ဆတူရော၍ ဂွမ်းဖြင့်ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ ဟင်းအိုး ဆားငံသွားလျှင် နီရဲနေသော မီးခဲကို ငံနေသော ဟင်းအိုးထဲတွင် ၂မိနစ်ခန့် ထည့်ထားပြီး ပြန်ဆယ်လိုက်ပါ။ ဘုရားပန်းများ တာရှည်ခံအောင်ထားနည်း ပန်းအိုးထဲသို့ ဘာမီတွန်(သို့) သကြား(သို့) ကန့်မှုန့်အနည်းငယ်(သို့) အကြွေစေ့-ကြေး ထည့်ပေးပါ။ ဘောလ်ပင် မှင်မလိုက်လျှင် အရက်ပျံပုလင်းထဲသို့ ဘောလ်ပင်ကို ၃မိနစ်ခန့် စိမ်ထားလိုက်ပါ။ ဖန်ခွက်အတွင်း ရေနွေးပူထည့်သော် မကွဲစေရန် ဇွန်းတစ်ချောင်းအား ဖန်ခွက်ထဲသို့ အရင်ထည့်ထားပြီးမှ ရေနွေးကို … Read more
“ပရဟိတ မင်းသားကြီး ကျော်သူ ကိုဗစ်ကို နိုင်သွားပြီ”
ပရဟိတမင်းသားကြီး ကျော်သူ ထံတွင် ကိုဗစ်ပိုး မတွေ့ရတော့ (ဝမ်းသာလိုက်တာ) ပရဟိတမင်းသားကြီး ကျော်သူ ပထမအကြိမ်ကိုဗစ် စစ်ရာတွင် Negative အဖြေ ထွက်ပေါ်လာကြောင်း သိရပါတယ်။ စေတနာမှန်လို့ အကျိုးပေးပါပြီ။ မင်းသားကြီး ကျော်သူ ရေးထားတဲ့ ပို့စ်ကို ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်- N ကွ! ဆိုတော့ မင်းတို့နည်းတူ ငါလည်းဝမ်းသာမိတာပေါ့ကွာ။ ဒါပေမယ့် ဒါတစ်သက်လုံး “N” ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိထားဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် … ငါ ဒါလေးရေးပေးလိုက် တယ်။ ဝမ်းသာတယ်ဆိုပြီး အပျော်မကြူးကြနဲ့။ မပေါ့ကြနဲ့။ လွတ်လပ်ပြီဆိုပြီး လမ်းမထွက် ဆေးရိုးလှမ်းကြသလို ဖြစ်ကုန်တော့မယ်။ သတိ! အသိ! အျမဲ ရွိ! ကျော်သူ( ခေတ္တ ဝေဘာဂီ) Unicode Version ပရဟိတမငျးသားကွီး … Read more
Categories အနုပညာသတင်း Leaveacomment
တူတူပုနျးတမျးကစားရာမှ တပတျကြျောကွာပြောကျဆုံးနတေဲ့ လေးနှဈအရှယျသမီးလေးပွညျ့ပွညျ့ဇှနျအား ရှာဖှတှေရှေိ့
တူတူပုန်းတမ်းကစားရာမှ တပတ်ကျော်ကြာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ လေးနှစ်အရွယ်သမီးလေးပြည့်ပြည့်ဇွန်အား ရှာဖွေတွေ့ရှိ ရွှေတောင်မြို့နယ် မကျီးပေါက်ကုန်းအုပ်စုကျောက်ဖူးကျေးရွာတွင် တစ်ပါတ်ကျော်ကြာ ပျောက်ဆုံးသွားသော 4နှစ်အရွယ် သမီးလေးရဲ့ ရုပ်အလောင်းကို ကျောက်ဖူးရွာ နှင့် ကန်သုံးဆင့်ရွာကြားလယ်ကွင်း စပါးခင်းအစပ်တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ (ပြည်/ရွှေတောင်)တို့မှသက်ဆိုင်ရာနှင့်ဆက်လက် ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်း၍ သမီးလေးရုပ်အလောင်းအား သဂြိုလ်ပေးရန် ပရဟိတ နာ/ကူ ရွှေတောင်အသင်းတို့ နှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ သမီးလေး ကောင်းရာမွန်ရာရောက်ပါစေ…. Unicode Version တူတူပုနျးတမျးကစားရာမှ တပတျကြျောကွာပြောကျဆုံးနတေဲ့ လေးနှဈအရှယျသမီးလေးပွညျ့ပွညျ့ဇှနျအား ရှာဖှတှေရှေိ့ ရှတေောငျမွို့နယျ မကြီးပေါကျကုနျးအုပျစုကြောကျဖူးကြေးရှာတှငျ တဈပါတျကြျောကွာ ပြောကျဆုံးသှားသော 4နှဈအရှယျ သမီးလေးရဲ့ ရုပျအလောငျးကို ကြောကျဖူးရှာ နှငျ့ ကနျသုံးဆငျ့ရှာကွားလယျကှငျး စပါးခငျးအစပျတှငျ ရှာဖှတှေရှေိ့ပါပွီ။ ကြှနျတျောတို့ မွနျမာနိုငျငံလူမှုကယျဆယျရေးအဖှဲ့ (ပွညျ/ရှတေောငျ)တို့မှသကျဆိုငျရာနှငျ့ဆကျလကျ ခြိတျဆကျပူးပေါငျး၍ သမီးလေးရုပျအလောငျးအား သဂွိုလျပေးရနျ ပရဟိတ နာ/ကူ … Read more
အဆုတ်ကျန်းမာရေးက ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာ အသက်ရှူတိုင်း သတိရ နေသင့်တာပါ ။ အသက်ကောင်းကောင်းရှူနိုင်မှ အဆုတ်က ကျန်းမာမှာ ဖြစ်သလိုလေထုညစ်ညမ်းစေတဲ့ အရာ မှန်သမျှ အဆုတ်ရဲ့ရန်သူပါပဲ ။ လေရှူသွင်းလိုက်တိုင်း ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် လေထုထဲက အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အရာဝတ္တုတွေကို အဆုတ်က လက်ခံရရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ဒါ့ကြောင့် အဆုတ်ကို သန့်စင်စေမယ့် အစားအသောက်တွေကို ရွေးချယ်ဖို့ အရေးကြီးပါ တယ် ။ ဒါမှ အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါတွေကို ကာကွယ်နိုင်မယ် ၊ အဆုတ်ကို အားကောင်းစေမယ် ။ ပန်းနာရင်ကျပ် ၊ လေပြွန်ရောင် ၊ အဆုတ်ရောင်တို့လို အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေဟာ မဖြစ်အောင် ရှောင်လို့ရတဲ့ ရောဂါတွေဖြစ်ပါ တယ် ။ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုရှိမယ် ၊ လေထုညစ်ညမ်းတာတွေ မရှူရှိုက်မိအောင် သတိထားမယ် ၊ … Read more
စုန်း………….. ” သမီး ၊ ဒီကိုလာစမ်း ။ လည်ပင်းက အညိုကွက်က ဘာဖြစ်တာလဲ ” မိခင်မေးလိုက်သည့် စကားကြာင့် မသန္တာစိုး အထိတ်တလန့် ဖြစ်သွားရသည် ။ အသေအချာ ဖုံးကွယ်ထားပါလျက်နှင့် မြင်ဖြစ်အောင်မြင်သေးသည် ။ ” သမီးလည်း မသိဘူး မေမေ ” ” ဟဲ့ ၊ စန်းတင် ။ စုန်းစုပ်တာနေမှာပေါ့ ” အဘွား ဝင်ပြောလိုက်တာကြောင့် မိခင် မျက်မှောင် တစ်ချက် ကုတ်သွားသည်ကို မြင်လိုက်ရသည် ။ ” ဟုတ် …ဟုတ်မယ် မေမေ ။ စုန်းစုပ်တာဖြစ်မယ် ” ” ဒီခေတ်ကြီးမှာ စုန်းတွေ ကဝေတွေ မရှိတော့ဘူး ။ မေမေ့ကို မှန်မှန်ပြောစမ်း … Read more
မွေးရာပါ ချမ်းသာဖို့ ဇာတာပါတဲ့ ရာသီခွင်များကိုပြောရရင်…
၀က်ခြံကြောင့် ကျန်ခဲ့တဲ့အမာရွတ်တွေ တစ်ပတ်အတွင်း ပျောက်ကင်းအောင် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ
၀က်ခြံကြောင့် ကျန်ခဲ့တဲ့အမာရွတ်တွေ တစ်ပတ်အတွင်းပျောက်ကင်းအောင် (၁)မျက်နှာသစ်ပါ ၀က်ခြံဖြစ်တဲ့ အသားအရေဟာ အဆီပြန်တဲ့အသားအရေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် မနက်(အိပ်ရာထ မဟုတ်ပါ) ကျောင်းမသွားခင်၊ရုံးမသွားခင် မျက်နှာသစ်ပေးပါ။ညအိပ်ရာ ၀င်ခါနီးတစ်ကြိမ် မျက်နှာသစ်ပေးပါ။ (၂)အာလူးသုံးပါ အာလူးကို အကွင်းလေးတွေလှီးပါ။သို့မဟုတ် ချေလိုက်ပါ။ပြီးရင် အမာရွတ်တွေကို အုပ်ထားပါ။မိနစ် ၃၀ လောက်ကြာရင် ခွာပြီးမျက်နှာသစ်ပါ။တစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်လောက်ပြုလုပ်ပေးရင် ၀က်ခြံအမာရွတ်မှ မဟုတ်ပဲ အခြားအမာရွတ်တွေပါ် သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ (၃)ဗီတာမင် စီ မှီဝဲပါ။ အရှင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ သံပရာသီးတစ်နေ့တစ်လုံးကို ဒီတိုင်းပဲစားစား၊ဖျော်ရည်ပဲလုပ်သောက်သောက် တစ်နေ့တစ်လုံးသောက်ပေးရပါမယ်။ အလုပ်များတယ်ဆိုရင်တော့ ဗိုက်တာမင်စီ ဆေးပြားလေးတွေ တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် သောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဗိုက်တာမင် စီဟာ အသားအရေအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပြီး အစက်အပြောက်လေးတွေကို သေးငယ်စေပါတယ်။ (၄)moisturizer အသုံးပြုပါ။ အမာရွတ်တွေကို ပြန်လည်အစားထိုးဖို့ ဆဲလ်တွေက ရေဓါတ်ကို လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် moisturizer ကိုအသုံးပြုပါ။ အများကြီး အသုံးမပြုပါနှင့်။အချို့ moisturizer … Read more
Facebook , Viber, Messger သုံးရင်း ထောင်နန်းမစံချင်ရင် ဒါလေး ဖတ်ထားပါဗျာ…
Facebook , Viber, Messger သုံးရင်း ထောင်နန်းမစံချင်ရင် ဒါလေး ဖတ်ထားပါဗျာ… Facebookသုံးသူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ပုဒ်မ ၆၆ ပုဒ်မ၆၆။ မည်သူမဆို အောက်ပါပြုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှု …!ထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင်ထိုသူအား ၃နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ ၊ ဒဏ်၂ရပ်လုံးဖြစ်စေချမှတ်ရမည်။ပုဒ်မ၆၆(က)။ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက်အတွင်းသို့ ယင်း၏ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ စံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်ချက်ကိုဖြစ်စေ၊ မူလအနေ အထားကိုဖြစ်စေ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်ဆီးခြင်းနားရှင်အောင်ပြောရရင်ပုဒ်မ၆၆(က)facebook /gmail ကို ခိုးယူခြင်းပါ။ Passwordပြောင်းခြင်း / gmailပြောင်းခြင်းပါ။ ပုဒ်မ၆၆(ခ)။ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကိုထိခိုက်စေရန် ဗိုင်းရပ်စ် ( သို့မဟုတ် )အခြားနည်း နဲ့ ဝင်ရောက်စေခြင်း…!!နားရှင်းအောင်ပြောရရင်~~~ပုဒ်မ၆၆(ခ)link အတုတွေကတဆင့် အချက်အလက်passwordခိုးယူခြင်းပါ။#ပုဒ်မ၆၆(ဂ)။#ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကိုသုံး၍ #ငွေကြေးနဲ့ပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်း၊#လိမ်လည်ခြင်း၊#အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ်#အကျိုးပျက်စေခြင်း#နားရှင်းအောင်ပြောရရင်~~~#ပုဒ်မ၆၆(ဂ)#onlineshoppingကတဆင့်ငွေလိမ်ယူခြင်းမျိုးပါ။ ပုဒ်မ၆၆(ဃ)။ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကိုသုံးပြီးလူတစ်ယောက်ကိုခြောက်လှန့်ခြင်း၊ အနိုင်အထက်ပြုခြင်း၊မတရားတားဆီးကန့်ကွတ်ခြင်းအသရေဖျက်ခြင်း၊ … Read more